ITowers of Florence, izimpawu kanye nemibono | Izindaba Zokuhamba
Florencia Ingelinye lamadolobha ahambela kakhulu e-Italy futhi awukwazi ukukuphuthelwa ohambweni, kepha iqiniso ukuthi ukuvakasha okukodwa ngeke kwanele. Uma ungeke uhlale isonto bese u-yebo noma yebo kufanele ubuye ngoba kuningi kuleli dolobha elibhekwa njenge- «imnyuziyamu evulekile".
Phakathi kwamasonto, izigodlo kanye neminyuziyamu kunemibhoshongo efihliwe enikeza imibono emisha ngaleli dolobha lasendulo yingakho ngincoma ukuthi ubavakashele. Abavuli iminyango yabo unyaka wonke, ngakho-ke isikhathi esihle sokubazi manje, lapho kusha ihlobo e-Italy. Ake sibone ukuthi ziyini lezi imibhoshongo enhle yokubuka yaseFlorence.
1 UMbhoshongo WaseSan Niccolò
2 UTorre della Zecca
3 UBaluardo waya eSan Giorgio
UMbhoshongo WaseSan Niccolò
Lona kungumbhoshongo kuphela eFlorence ongazange "usikwe", okungukuthi, ukwehlisa ukuphakama. Abanye, esikhathini esithile emlandweni, bake bathola lolu hlobo lokusokwa. Umbhoshongo itholakala Piazza Poggi y lakhiwa ngo-1324 ngomqondo wokuvikela isifunda sase-Oltrarno, ngakho-ke kwakuyingxenye yezindonga zokuzivikela. Namuhla isakhiwo esinesizungu.
Yenzelwe ngokususelwa kwimidwebo ka-Arnolfo di Cambio, umdwebi wezakhiwo wase-Italiya nombazi waleso sikhathi owayephethe iPalazzo Vecchio noma iBasilica yaseSanta María del Fiore, edolobheni elifanayo. Nokho ine-catwalk yayo emnandi futhi Ihhovisi lezokuvakasha lasendaweni liyibuyisile futhi layenza yaphepha ukuze izivakashi zikwazi ukuhamba ngayo ngaphandle kwezinkinga.
Inezinyathelo eziyi-160 phezulu futhi lapho ekugcineni ufika lapho uyakujabulela Ukubukwa okungu-360º kukaFlorence.
Into yokuqala oyibonayo ePiazzale Michelangelo nasendaweni ezungeze ukwakheka kwamadolobha kanye nomfula i-Arno. I-façade yasenyakatho ine-arch namafasitela amile ayisithupha futhi i-façade yaseningizimu ivuleke ngokwengeziwe, inamakhothamo amathathu amakhulu, elinye ngaphezu kwelinye. Umbhoshongo uvulwe kabusha ngoJuni 24, waba ngowokuqala kwemibhoshongo kaFlorence ukuvula kabusha le sizini ka-2017.
Phakathi kukaJuni 24 no-Agasti 31 kuzovulwa nsuku zonke kusuka ngo-5 kuya ku-8 ntambama. Ngemuva kwalokho kuzovulwa wonke uSepthemba phakathi kuka-4 no-7 pm. Ukuvakasha okuqondiswayo kuyikho njalo uhhafu wehora.
UTorre della Zecca
Lo mbhoshongo useduze nomfula i-Arno futhi khumbula indawo lapho idolobha lakha khona izinhlamvu zemali zalo ngoba amanzi omfula ayesetshenziswa yizando ezazibumba isiliva. Lo mbhoshongo wawungumbhoshongo wokugcina wokuzivikela eFlorence ohlangothini olusempumalanga yedolobha, umbhoshongo owavala izindonga emakhulwini eminyaka adlule.
Yakhelwe ukuvikela iPonte Reale, ibhuloho elizokwakhiwa ngemuva kokuba isikhukhula esinamandla sicekele phansi idolobha ngo-1333. Kodwa iqiniso ukuthi lo msebenzi awuzange uqedwe futhi umbhoshongo wasala ungenalo ibhuloho lawo. Namuhla uzizwa enesizungu nakakhulu ngoba ushiywe phakathi nokuwela umgwaqo ePiazza Piave. Kwakungu-1532 lapho behlisa khona ukuphakama kuya kwamanje Amamitha ayi-25.
Ngawo lowo nyaka wajoyina i- I-Old Fort Baluardo di Mongibello, eyalelwe ngu-Alessandro de'Medici ukuthi athuthukise izivikelo zedolobha. Ngokushesha umbhoshongo waqala ukubizwa IZecca (UZecca ubhekisa ekwakhiweni kwezinhlamvu zemali nokuthi ekugcineni wasebenza ngaphakathi isikhashana). Uma uvakashela umbhoshongo namuhla bayakutshela ukuthi izando eziphakanyiswe ngamasondo anamazinyo zisebenze kanjani ngenxa yamanzi omfula ahamba ngemigudu nezikhala ezingezansi kombhoshongo.
Yonke imigudu isekhona kepha awukwazi ukuwavakashela, akutshela kuphela ngomsebenzi wawo. Futhi kunomhubhe oxhuma iTorre della Zecca nePorta San Niccolò ehlala igcwala amanzi futhi impela akekho ongavakashela. Noma kunjalo, yini imisebenzi yokubuyisela iqale ngonyaka we-2014 kubiza ama-euro ayizinkulungwane ezingama-300 futhi kwathatha izinyanga eziyi-18 ngakho namuhla singabona umbhoshongo njengoba wawubukeka emakhulwini eminyaka adlule.
Iqale yavula iminyango yayo ngehlobo eledlule kanti-ke, ngenhla usuphinde futhi Ukubukwa okungu-360 ° kukaFlorence. Ukhuphuka futhi usuka esitezi sesine unemibono emihle kakhulu yePalazzo Vecchio, iSinagoge, iDuomo noma iPiazzale Michelangelo, isibonelo. Umthola ePiazza Piave futhi kulo nyaka ivulwe ngoJuni 15 futhi ngizokwenza futhi ngo-Agasti 19 phakathi kuka-5 no-8 ntambama.
Izovulwa futhi ngoSepthemba 16 kusuka ngo-4 kuye ku-7 ntambama nango-Okthoba 14 kusuka ngo-3 kuye ku-6 ntambama ngokuvakasha okuqondiswayo njalo ngesigamu sehora.
UBaluardo waya eSan Giorgio
Kuyingxenye yokuvikelwa komlando kaFlorence futhi kuyi- isakhiwo se-trapezoidal ezindongeni eziseduze nasePorta San Giorgio, eningizimu-ntshonalanga yedolobha. Yakhiwa nguCosimo I de Medici, Grand Duke waseTuscany, ngo-1544 komunye wamarampu aklanywa nguMichelangelo Buonarroti owawusele kusukela kusiza waya edolobheni ngo-1529.
Umqondo bekuwukuthuthukisa ukuzivikela yingakho yakha isethi ngemuva kokwakhiwa osekuvele kunyamalale kodwa okwakunezindonga ezijiyile nezikhali lapha nalaphaya. Namuhla indawo Yindlunkulu yeBalestrieri Fiorentini, amadoda abamba iqhaza kwiCalcio Storico Fiorentino Procession egqoke isitayela sangenkathi ephakathi, ancintisana kwiPalio Festival.
Umbhoshongo uvulwa kusuka ngoJulayi 8 kuya ku-Agasti 12 kusuka ku-5 kuye ku-8 pm, nakuSepthemba 9 kusuka ku-4 kuye ku-7 pm nango-Okthoba 7, kunemihlahlandlela njalo ngehora.
Kuyisango laseningizimu lomuzi futhi ikuvumela ukuthi udabule ingxenye yodonga lwangenkathi ephakathi. Kusesifundeni i-Oltrarno futhi kumi ezimpambanweni zemigwaqo eminingana. Isicabha esidala besinendawo eyanele yamakalishi nabahamba ngezinyawo bedlula ngeminyango eseceleni. Amasango ensimbi asekhona futhi ifresco efanayo ne-Virgin kanye nabangcwele.
Ngaphakathi kukhona izingcwecwe zemabula ezimbili ezikhumbula ukungena kuFlorence kaPapa Leo X, eyodwa, nokungena kukaCharles V, omunye. UFlorence, njenganoma yiliphi idolobha lasendulo, wayehlala eguqula futhi ukuzivikela kwakuyisikhathi eside kuyindaba eyayikhathaza ababusi bayo, ngakho-ke noma nini lapho izindonga zikhula izakhiwo ezindala zazilahleka. Yilokho okwenzeka ngesonto elalikhona kusukela ngo-1068 futhi kamuva lathathelwa indawo elinye, elimi njengamanje.
ILa Porta Romana ivulwa kane ngonyaka Futhi: kusuka ngoJulayi 22 kuya ku-Agasti 26 phakathi kuka-5 no-8 ntambama, ngoSepthemba 23 kusuka ngo-4 kuya ku-7 ntambama nango-Okthoba 21 kusuka ngo-3 kuye ku-6 ntambama. Izinkambo eziqondiswayo zikhona njalo uhhafu wehora.
Kuyacaca ukuthi le mibhoshongo emine ayibukeki nje kuphela ngenxa yezindaba zayo nangakudala kwayo: iyasinikeza Ukubukwa okuhle kwe-panoramic kwedolobha elingenakulibaleka.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Florencia » ITowers of Florence, izimpawu nezindawo zokubuka
Umhlahlandlela osheshayo wokundiza nezingane uye kunoma iyiphi indawo